Indlu yeLifa leMveli eNerja enePhulo lokuQubha - I-Airbnb
Indlu yeLifa leMveli eNerja enePhulo lokuQubha
ULaura - BELVILLA unezimvo eziyi-996 zezinye iindawo.
Ukuqhayisa ngamathafa amahle anolwandle kunye nembonakalo yeentaba, le ndlu inamagumbi okulala amathathu eMaro inokusingatha abantu aba-6 ngokukhululeka. Kufanelekile ukuba usapho okanye iqela elikhulu lihlale. I-cottage ine-swimming pool yabucala ukonwabela ukuqubha kunye negadi yokuphumla.
Ihlathi likumgama oziimitha ezingama-700. Yonwabela ivenkile enkulu ephithizelayo kunye nombindi wedolophu, umgama nje oziikhilomitha ezi-2. Iindawo zokutyela zikwakufuphi kumgama oziikhilomitha ezi-2. Umgama nje ozimitha ezingama-700 kulwandle, ukonwabela ukuhamba elwandle.
I-cottage eshushu ephakathi inegadi enefenitshala kunye ne-terrace. Kukwakho nequla lokuqubha ukuhlaziya kunye nezitulo zokuphumla zokuphumla. Indawo yokupaka ikwisiza. Ibhedi kunye nesitulo esiphezulu zifumaneka simahla.
Izithuthi zikawonke-wonke zikumgama oziikhilomitha ezi-2, ngelixa isikhululo seenqwelomoya saseMalaga sikumgama oziikhilomitha ezingama-77.
Ngena phakathi kwe-5 - 8 PM kwaye uphume phakathi kwe-11 AM - 12 PM.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Igumbi lokuhlala (ibhedi yesofa ephindwe kabini, iTV(isathelayithi), indawo yomlilo, isidlali-DVD, iyunithi yestereo), Ikhitshi (i-cooker(i-ceramic), i-oveni, i-microwave, isitya sokuhlamba izitya, ifriji-ifriji, umatshini wokuhlamba), igumbi lokulala( Ibhedi encinci ephindwe kabini), igumbi lokulala (2x ibhedi eyodwa), igumbi lokulala (2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela (ibhafu eneshawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidet), igumbi lokuhlambela (ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese), indawo yogcino-mali/iveranda, BBQ, ichibi lokuqubha( bucala, 8 x 6 m.))
ikhitshi langaphandle(BBQ), ikhapoti, ukufudumeza, ithafa, igadi(yabucala), ifenitshala yegadi, 2x yokupaka, izitulo
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-996 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Inombolo yomthetho: CR/MA/01371